Warshadaha Cabbiraadda Dhagaxa Granite & Shirkado - Warshadda Cabbiraadda Dhagaxa Shiinaha
Sax Granite Tri Square Ruler
Inagoo ka sii hormarinayna isbeddellada warshadaha ee caadiga ah, waxaan ku dadaalnaa inaan soo saarno afargeesle saddex -geesle ah oo tayo sare leh. Iyada oo la adeegsanayo dhagaxa madoow ee Jinan sida ugu wanaagsan ee alaabta ceeriin ah, labajibbaaranaha saddexagalka dhagaxa ah ee saxda ah ayaa sida ugu habboon loo adeegsadaa si loo hubiyo saddexda isku -duwaha (ie X, Y iyo Z dhidibka) ee xogta baaxadda leh ee qaybaha mashiinnada. Shaqada Granite Tri Square Ruler waxay la mid tahay Granite Square Ruler. Waxay ka caawin kartaa aaladda mashiinka iyo adeegsadaha waxsoosaarka mashiinnada inay fuliyaan kormeerka xagal qumman iyo qorista qaybaha/shaqooyinka waxayna cabbiraan isugeynta qaybaha.
Granite V-Block waxaa si weyn loogu adeegsadaa aqoon isweydaarsiyada, qolalka aaladda & qolalka caadiga ah ee codsiyada kala duwan ee aaladaha iyo ujeeddooyinka kormeerka sida calaamadeynta xarumaha saxda ah, hubinta xoogga, isbarbaryaac, iwm. qaybo cylindrical inta lagu jiro kormeerka ama wax soo saarka. Waxay leeyihiin magac-u-yaal 90-digrii ah “V”, oo udub dhexaad u ah isla markaana barbar socda xagga hoose iyo labada dhinac iyo afar gees ilaa dhammaadka. Waxaa lagu heli karaa cabbirro badan waxaana laga sameeyaa Granite granite black.
Waxaan soo saari karnaa isbarbar -dhigyo isku -dhafan oo leh cabbirro kala duwan. 2 Waji (lagu dhammeeyay cidhifyada cidhiidhiga ah) iyo 4 Waji (dhinac walba laga dhammeeyay) ayaa la heli karaa sida Darajada 0 ama Darajada 00 /Darajada B, A ama AA. Isbarbar -dhigyada Granit -ka ayaa aad waxtar ugu leh samaynta dejinta mashiinnada ama wax la mid ah oo gabal tijaabo ah lagu taageerayo laba sagxadood oo siman oo isbarbar socda, asal ahaanna abuuraya diyaarad fidsan.
Granite Straight Ruler oo leh 4 dusha sare oo sax ah
Granite Straight Ruler oo sidoo kale loo yaqaan Granite Straight Edge, waxaa soo saaray Jinan Black Granite oo leh midab aad u fiican iyo saxnaan aad u sareysa, oo leh qabatinka darajooyinka saxda ah ee sare si loo qanciyo dhammaan baahiyaha isticmaale ee gaarka ah, labadaba aqoon isweydaarsiga ama qolka mitirka.
Taargooyinka dhagaxa madoow ee madow waxaa lagu soo saaraa saxnaan sare iyadoo la raacayo jaangooyooyinka soo socda, iyada oo la qabatimay darajooyin sax ah oo sare si loo qanciyo dhammaan baahiyaha isticmaalaha gaarka ah, labadaba aqoon isweydaarsiga ama qolka mitirka.
Waxaan bixinaa xabadaha dhagaxa dhagaxa ah ee saxda ah oo leh xirmo ilaalin oo ugu fiican, cabbirro iyo darajo sax ah ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo codsigaaga.
Saldhigga garaacida ee Granite Precision
Isbarbardhigga Dial oo leh Granite Base waa gage isbarbardhigga nooca kursiga keydka ah oo si adag loogu dhisay hawsha iyo kormeerka kama dambaysta ah. Tusaha wicitaanka waxaa lagu hagaajin karaa si qumman oo lagu xiri karaa meel kasta.
Granite Square Ruler oo leh 4 dusha sare oo sax ah
Taliyayaasha Granite Square waxaa lagu soo saaray saxnaan sare iyadoo la raacayo heerarka soo socda, iyada oo la qabatimay darajooyin sax ah oo sare si loo qanciyo dhammaan baahiyaha isticmaale ee gaarka ah, labadaba aqoon isweydaarsiga ama qolka mitirka.
Granite Vibration Platform dahaaran
Miisaska ZHHIMG waa goobo shaqo oo gariir leh, oo laga heli karo miiska dhagaxa adag ama dusha miiska indhaha. Gariirrada dhibka leh ee ka imanaya bay'ada ayaa miiska laga soo dhex-saaray oo leh xuub-biyo-xireenno hawada xuub-wax-ku-ool leh halka walxaha farsamaynta sambabka sambabka ay joogteeyaan miis miis sare leh. (± 1/100 mm ama ± 1/10 mm). Waxaa intaa dheer, unug dayactir oo hawo-qaboojiye lagu daray ayaa lagu daray.
Qalinka Granit Square Ruler, Sax Granite, Sax Granite Cube, Isbarbar dhigyada Granite Precision, La taaban karo Epoxy, Sax Granite dusha sare,